VILANY TANY – filazantsaramada
Publié parfilazantsaramada	 mai 18, 2018 Laisser un commentaire sur VILANY TANY
« Ary tsy ketraka izahay; fa na dia mihalevona aza ny toetray ivelany, dia havaozina isan’andro isan’andro kosa ny toetray anaty. » II Korintiana 4:16
– Mihalevona ny toetra ivelany. Fomba fiteny ny hoe: mandalo ny fiainana eto an-tany, miserana ihany izany. Tsy maintsy mihaantitra ny momba ny tenan’ny olona rehefa mitombo ny taona iainany eto an-tany. Mihalevona ny toetra ivelany. Ny fiafarana dia miverina ho vovoka, dia ny fahafatesana.
– Misy anefa ny fanahy ao anatintsika ao izay mety manaraka io fahalevonana io raha tsy mandalo fanavaozana. Misy mantsy ny fahotana nolovana, na fahotana mitarika amin’ny fahafatesana. Miaraka mihalevona amin’ny toetra izany.
– Havaozina isan’andro ny toetra anaty. Avy amin’ny Fanahin’Andriamanitra no andraisan’ny fanahintsika fanavaozana. Ny finoana an’i Jesosy no mitarika io Fanahy ao anatintsika io, ary io no manangana antsika ho zanak’Andriamanitra. Avaozina isan’andro ny fandraisana izany Fanahy izany. Ny famakiana ny Teny sy ny fiainana azy isan’andro no miteraka izany fanavaozana izany, vokatry ny fibebahana marina.
– Toy ny rakitra soa ao anaty vilany tany ny Fanahy Masina ao anatintsika. Ny toetrantsika ivelany no vilany tany, ary ny Fanahy no toetra anaty.
Aoka ary isika hanaiky avaozina isan’andro amin’ ny fandraisana ny Fanahy. Amen.
Publié parfilazantsaramada mai 18, 2018 Publié dansUncategorized